Budata Kaspersky Virus Removal Tool maka Windows
Budata Kaspersky Virus Removal Tool
Free Budata maka Windows (181.00 MB)
Budata Kaspersky Virus Removal Tool,
Ejiri ngwa ọrụ mwepụ nje Kaspersky nefu, Kaspersky Virus Removal Tool, iji wepu ụdị nje niile na kọmputa gị. Mmemme a, nke akwadobere site na iji teknụzụ nyocha dị irè ejiri na Kaspersky Anti-Virus, bụ nhọrọ dị mma maka ihicha sọftụ ọjọọ nke batara na kọmputa gị. Ebe mmemme a bụ naanị ngwa ọrụ iwepụ nje, ọ naghị enye nchekwa oge niile na kọmputa gị. Maka usoro a, a ga -etinyerịrị ngwanrọ antivirus na kọmputa gị.
Budata Kaspersky Antivirus efu
Nagbanyeghị etu ha si eji kọmputa ahụ nke ọma, ha ka na -eyi egwu ịntanetị na mwakpo malware, yabụ ekwesighi ileda mkpa ọ dị inwe nhazi antivirus ahaziri nke ọma.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọrịa nje abanyela na PC yana ngwa mmemme nchekwa nwere nkwarụ, enwere ngwaọrụ ọzọ enwere ike nwalee: Ngwaọrụ mwepụ Nje Virus Kaspersky.
Ị na -etinye ngwa mwepụ ọbụlagodi na sistemụ nje
Nọtụtụ oge, ọ nweghị ihe enwere ike ime mgbe nje ahụ adịla na kọmputa echebere ka malware na -anaghị ekwe ka ndị ọrụ wụnye ma ọ bụ melite ngwanrọ antivirus ọ bụla. Naka nke ọzọ, ngwaọrụ Kaspersky emeela ụfọdụ ihe nchebe. Ọbụlagodi na Ọnọdụ Nchekwa, enwere ike itinye ya na kọmpụta butere ọrịa ahụ wee wepu nje, Trojans, rootkits, adware ma ọ bụ spyware.
Nhazi enyi na enyi yana usoro nyocha ngwa ngwa
Ntinye ngwa ngwa yana usoro nyocha dị oke ọsọ, ngwa ahụ dakọtara na akụrụngwa kọmputa. Ngwa ihe eji ewepụ nje Virus Kaspersky dịkwa nkọ ma ebe usoro a ga -arụ nokirikiri, ndị ọrụ nwere ike ịga nihu nọrụ ha naanị site na ịpị bọtịnụ nyocha.
Mee ka ọnọdụ nyocha miri emi rụọ ọrụ
Ọ bụrụ na nsonaazụ nyocha akpaaka anaghị eju afọ, ị nwekwara ike nwalee Manual Clean, nke na-eme nyocha kọmputa nke ọma, wee mepụta akụkọ zuru ezu nke enwere ike izigara Kaspersky maka nhazi ọzọ.
Ezipụta ebe ị na -aga
Naka nke ọzọ, ụdị data ezubere iche nke ekwesịrị inyocha nwekwara ike họrọ, si otú a na -egbochi mpaghara nyocha yana oge nyocha, mana a na -atụ aro naanị ma ọ bụrụ na ndị ọrụ mara saịtị ọrịa. Ọzọkwa, ịgbanwere ọkwa nchekwa dị elu nwere ike bute oge nyocha.
Mmemme mwepụ nje na -akwụghị ụgwọ maka kọmpụta Windows, ihe nyocha nje na ihe nhicha Kaspersky Free Virus Removal Tool anaghị achọ nrụnye mgbe nbudata; naanị ị ga -eso usoro ndị a dị mfe:
Mepee faịlụ ebudatara.
Gbaa Kaspersky Virus Removal Tool.
Kaspersky Virus Removal Tool Ụdịdị
Nha faịlụ: 181.00 MB